Uzo 5 kacha elu na njikwa ihe omuma di iche (DAM) Na-eme Na 2021
Ga na 2021, enwere ụfọdụ ọganihu na-eme na ụlọ ọrụ Digital Asset Management (DAM). Na 2020 anyị hụrụ oke mgbanwe n'omume ọrụ na omume ndị ahịa n'ihi covid-19. Dị ka Deloitte si kwuo, ọnụ ọgụgụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ si okpukpu abụọ na Switzerland n'oge ọrịa a na-efe efe. E nwekwara ihe mere a ga-eji kwenye na nsogbu ahụ ga-eme ka mmụba na-adịgide adịgide n'ọrụ na-aga n'ihu n'ụwa niile. McKinsey na-akọkwa ndị na-azụ ahịa na-akwagharị
Nchịkọta ọdịnaya: Njikwa eCommerce End-to-End maka Brands na ndị na-ere ahịa
Satọdee, Nọvemba 18, 2017 Thursday, May 7, 2020 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa ọtụtụ ọwa maara mkpa ọ dị ọdịnaya ngwaahịa ziri ezi, mana yana iri puku kwuru iri puku peeji ndị agbakwunyere na weebụsaịtị ha kwa ụbọchị site na narị narị ndị ahịa dị iche iche, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume iji nyochaa ya niile. N'akụkụ dị iche iche, ụdị na-ejikarị ihe ndị dị mkpa eme ihe, na-eme ka o siere ha ike iji hụ na ndepụta ọ bụla na-adịgide. Ihe iseokwu bụ na ndị na-ere ahịa na ụdị ahịa na-anwa ịmekarị nsogbu nke
Wulite Mmekọrịta Ndị Ahịa Kwadoro na Ogo Ọdịmma
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya chọpụtara na pasent 66 nke omume ịzụ ahịa n'ịntanetị gụnyere ihe mmetụta uche. Ndị ahịa na-achọ ogologo oge, njikọ nke mmetụta uche nke na-agafe karịa bọtịnụ ịzụta na mgbasa ozi ezubere iche. Ha choro inwe obi uto, iru ala ma obu obi uto mgbe ha na ndi ahia ahia na ntanetị. Ndị ụlọ ọrụ ga-enwerịrị ike ịme mmekọrịta ndị a na ndị ahịa ma guzobe iguzosi ike n'ihe dị ogologo oge nke nwere mmetụta karịrị otu ịzụta. Zụrụ bọtịnụ na mgbasa ozi agbadoro na mgbasa ozi
Shotfarm: Ngwaahịa Ntanetị Ngwaahịa maka Branddị na Nmepụta
Otu n'ime ọtụtụ ihe m mụtara mgbe m na IRCE bụ na, maka ụdị na ndị na-emepụta, ecommerce abụghị ihe gbasara ụlọ ahịa azụmaahịa ha n'ịntanetị n'ihi na ọ bụ maka ụlọ ahịa dị n'okpuru ala nke nwere ike ree ma kesaa ngwongwo ha n'aha ha. . Dika ulo oru ahia ahia na eme ka ha na ndi ahia ha nwee mmekorita di egwu, ha nwere ike icho ndi ozo na ndi ozo aka ka ha nwekwuo onu ahia ha.